Canshuuraha dhoofinta ee Ruushka ayaa kordhin doona 2.5 jeer - Shiinaha Foshan Hermes Steel
Canshuuraha dhoofinta ee Ruushka ayaa kordhin doona 2.5 jeer
Ruushka wuxuu kordhiyay canshuuraha dhoofinta ee birta duugga ah 2.5 jeer. Tallaabooyinka maaliyadeed waxay dhaqan galayaan laga bilaabo dhammaadka Janaayo muddo 6 bilood ah. Si kastaba ha noqotee, iyada oo la tixgelinayo sicirka alaabta ceyriinka ah ee hadda jirta, kororka canshuuraha ma horseedi doono in gebi ahaanba la joojiyo dhoofinta, laakiin si aad u ballaaran, waxay u horseedi doontaa hoos u dhac ku yimaada faa'iidooyinka iibka dhoofinta. Qiimaha canshuuraha dhoofinta ee ugu hooseeya waa 45 euro / tan halkii uu hadda ka ahaa 5% (qiyaastii 18 euro / ton oo ku saleysan sicirka suuqa adduunka ee hadda).
Sida laga soo xigtay warbaahinta, kororka canshuuraha waxay keeni doontaa hoos u dhac weyn oo ku yimaada qiimaha iibka dhoofinta, halka kharashka dhoofiyaasha uu kordhi doono ku dhowaad 1.5 jeer. Isla mar ahaantaana, sababtoo ah heerarka sare ee oraahyada caalamiga ah, waxaa la filayaa in xaddiga birta duugga ah ee loo soo raro suuqyada ajnabiga ah aysan hoos ugu dhici doonin isla markaaba ka dib marka sharciyada cusub ay dhaqan galaan (ugu yaraan bisha Febraayo). Dhibaatada keenista alaabtu waa mid aad u daran suuqa biraha duugoobay. Turkiga ayaa laga yaabaa inay wajahdo yaraanta alaabta ceyriinka bisha Febraayo. Si kastaba ha noqotee, waxaan u maleynayaa in hirgelinta canshuurahan, gaar ahaan marka loo eego macnaha yaraanta, aysan gabi ahaanba ka reebi doonin Ruushka iibiyaha. Ka sokow. Tani waxay carqaladeyn doontaa ganacsiga Turkiga, ”ayuu yiri ganacsade Turki ah oo wareysi siiyay warbaahinta.
Isla mar ahaantaana, maadaama ka-qaybgalayaasha suuqyada wax dhoofintu aysan wax shaki ah ka qabin hirgelinta canshuuraha cusub, dhammaadka sannadka, qiimaha wax iibsiga dekedda waxaa la goyn doonaa 25,000-26,300 rubil / ton (338-356 US dollars / ton) Dekedaha CPT, taas oo awood u siin doonta iibinta faa'iidada leh. , Iyo kordhinta canshuuraha.